“Anigu sifo sharci ah baan ku imid, sifo sharci ah unbaaana la iiga qaadi karaa”, – Gudoomiyaha Baarlamaanka Puntland oo waraysi bixiyay | Hadalsame Media
Home Wararka “Anigu sifo sharci ah baan ku imid, sifo sharci ah unbaaana la...
“Anigu sifo sharci ah baan ku imid, sifo sharci ah unbaaana la iiga qaadi karaa”, – Gudoomiyaha Baarlamaanka Puntland oo waraysi bixiyay
(Garoowe) 07 Nof 2019 – Gudoomiyaha Baarlamaanka Puntland Cabdixakiin Maxamed Axmed (Dhoobo) ayaa BBC Somali u sheegay in aysan “sharci ahayn” codkii maanta Baarlamanka ee xilka looga xayuubiyay.
Guddoomiyihii barlamaanka ee Puntland, Cabdixakiin Maxamed Axmed (Dhoobo) ayaa ilaa iyo hadda aanan ka hadlin xil ka qaadista lagu sameeyay.
Previous articleDAAWO: ”Tira-koobka Kenya wuxuu sheegay in reer Mandheera ay 25% dhinteen!” – Siyaasiyiin Soomaalida iyo Kenyan ah oo isku helay Twitter-ka!
Next articleTalyaaniga oo malaayiin doollar ku bixinaya qalabaynta isbitaallo dhowr ah oo dalka ku yaalla (Heshiis dhacay)